Dhuunta kulul ee galvanized biibiilaha birta dhuunta dareeraha cadaadiska hooseeya Q235 A106 A53 warshad iyo soosaarayaasha | Huayi
Dhuumaha galvanized welded wuxuu u qaybsan yahay galvanizing kulul iyo galvanizing qabow. Dhumucda lakabka galvanizing dhuuqidda kulul, qiimaha jaban ee galvanizing, dusha sare ma aha mid aad u siman. Dhuumaha kulul ee galvanized waa in la sameeyo biraha la shubay la matrix bir si ay u soo saaraan lakabka daawaha, taas oo ka dhigaysa substrate iyo daahan isku. Galvanizing kulul waa in marka hore aashitada dhuunta birta. Si meesha looga saaro xabagta birta ah ee dusha tuubada birta ah, ka dib marka la soo qaado, waxaa lagu nadiifiyaa iyada oo la raacayo ammonium chloride ama zinc chloride aqueous solution ama taangiga xalka biyaha ee isku dhafka ah ee chloride ammonium iyo chloride zinc, ka dibna loo diro qubeyska kulul . Galvanizing galinta kulul waxay leedahay faa'iidooyinka dahaarka labiska, adhesion xoog leh iyo nolosha adeegga dheer.
Darajada biibiilaha birta Q235A ， Q235C 、 Q235B
Ballaca Dibedda 26-650mm
dhumucda derbiga 2.0-12mm
Hore: ASTM AISI SS ul dhalaalaysa 201 304 316 birta birta aan birta lahayn ee usha/baarka loogu talagalay dhismaha/Bixinta goynta mashiinka wax -goynta
Xiga: Birta birta ah ee qabow ee jiingadda leh ee birta ah ee birta kulul ee la duubay birta 3-250mm